बिचार र ब्लग – Yuwa Aawaj
काठमाडौं : अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय छिन् । उनले देखेका र भोगेका कुराहरु सामाजिक सञ्जाल मार्फत पोख्दै आएकी छिन् । उनले शुक्रबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा मनमा लागेका कुरा भन्दै लामो एक पोस्ट सेयर गरेकी छिन् । उनले आफ्नो पोस्टको सुरुमा नै कसैसँग मिल्न गएमा माफि चाहन्छु समेत भनेकी छिन् । उनले पोस्टमा ६४ सालको राजनीतिक आ'न्दोलन देखि आजसम्म आइपुगेको देशको आफूले लेखेको अवस्थाको बारेमा लेखेकी छिन् । उनले हिन्दु धर्मको अस्तित्व सं'कटमा परेको बताएकी छिन् । साथमा नेताहरुकै कारण नेपाल भन्ने देश थियो भन्ने खोजीको विषय हुने उल्लेख गरेकी छिन् । उनले भनेकी छिन् :- मनमा लागेको र भोगेको देखेको कुरा भन्दैछु । हजुरहरु कसैको सन्दर्भ मिल्न गएको भए माफी पाउ ।गा’ली खान्छु त्यो पनि थाहा छ ।राजनीतिमा अलि सचेत भएको भनेको ४६ सालको आ’न्दोलन देखि हो ! त्यो पनि पल्लो घरको अगाडि साथिला
काठमाडौँ : राष्ट्रियसभाका सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनु बेइ'मानी हुने बताएका छन् । साथै, देवकोटाले एमालेलाई जेठ ३ अगाडिको अवस्थामा नफर्काउनु सर्वोच्च अ'दालतको मानहा'नी भएको समेत बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आ'देशविपरीत पटक–पटक संसद विघट'न गरेर संविधान मिच्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजिनकरुपमा माफी माग्नुपर्ने सांसद देवकोटा बताउँछन् । केपी ओलीले अहिले प्रलो'भन बाँड्न थालेको बताउँदै डा। देवकोटा भन्छन्, ‘आन्दो'लनले उचाई प्राप्त र विजयउन्मुख भएपछि विभिन्न प्रलोभन दिइन्छ । पासा फालिन्छ । नेपाली जनताको ठूलो त्याग तपस्या र वलि'दानीपूर्ण आ'न्दोलन लगायतबाट प्राप्त संविधानलाई बन्धकीमा राखेर कुनै पनि माननीयज्यूहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिनु हुँदैन । फिर्ता लिनु बेईमानी हो । ‘सर्वोच्च अदालतले ०७५ जेष्ठ ३ अगाडि
काठमाडौं : गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएर चुरे दो'हन गर्ने योजनालाई राष्ट्रघा'ती क'दमको संज्ञा दिएका छन्।कान्तिपुर दैनिकमा शुक्रबार प्रकाशित यादवको अन्त'र्वार्तामा यस्तो खुलाशा भएको हो। प्राकृतिक स्रोत, साधन, पर्या'वरणजस्ता विषयलाई संसद्मा छलफलसम्म नगराई अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर जुन खालको निर्णय गरियो, यो राष्ट्रघा'ती छ। नेपालको हितमा छैन। तराई, मधेस र भावी सन्ततिमाथि गरिएको ठूलो अपराध हो,’उनले भनेका छन्,‘सदनमा लामो छलफल गरेर के गर्दा मुलुकको हित हुन्छ । आफ्नो देशमा उपयोग कसरी गर्ने, वैज्ञानिक रूपमा निकासी कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल हुनुपथ्र्यो। कानून बनाएर वैज्ञानिक ढंगले काम गर्नुपथ्र्यो तर केही नगरी आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि गर्न नहुने काम सरकारबाट भएको छ। यसलाई मैले राष्ट्रघा'ती कदमका रूपमा लिएको छु।’त्यस्तै चुरे संरक्षणका
काठमाडौ : सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश विवादित बनेको छ। विघटित प्रतिनिधिसभामा विचा'राधीन विधेयक छलेर सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि अहिले त्यसको सर्वत्र वि'रोध भइरहेको छ। आफ्नो पद जगाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्या'देशलाई ह'तियार बनाएपछि उनको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा एक प्रयोगकर्ताले सत्ताका लागि प्रधानमन्त्री ओली जुन सुकै स्तरमा गिर्न तयार हुने टिप्पणी गरेका छन्। संसदमा विचाराधीन राष्ट्रिय सरोकारको मुद्दालाई जुन किसिमले कार्यपालिकीय कानुनद्वा'रा लागू गर्न खोजिएको छ, त्यो भने निःसन्देह आश्चर्यजनक र आपत्तिजनक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। संसद्मा विश्वासको मत पनि नपाएपछि स्वतः कामचलाउ भैसकेको सरकारले प्रतिनिधिसभा वि'घटन हुने अघिल्लो दिन अध्यादेश सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले विघटनको लगत्तै दुई दिनपछि जारी गर्नुमा ग'म्भीर जा'लसाजी उनीहरूको भनाई छ। संसदमा ना
मनिषा कोइराला भन्नुहुन्छ : राजसंस्था फर्काउन ‘कोर्स करेक्शनका लागि काँग्रेसले विनम्रता देखाउनुपर्ने ।
काठमाडौ : बलिउड नायिका मनिषा कोइरालाले नेपाली काँग्रेसले ‘कोर्स करेक्शन’ का लागि विनम्रता देखाउनुपर्ने सुझाव दिएकी छिन् । उनले वीपी कोइरालाले राजा नभए देश पनि नबाँच्ने र राजतन्त्रलाई फ्याँक्ने उद्दोग गर्न नहुने भनी दिएको अभिव्यक्ति उल्लेख गर्दै यस्तो सुझाव दिएकी हुन् । काँग्रेस नेता लोकेश ढकालले वीपीले अन्तिम समयमा अन्तवार्ताका क्रममा ‘प्रजातन्त्र विना राजतन्त्र अड्दैन, राजा नभए देश पनि बाँच्दैन । राजतन्त्रलाई फयाँक्ने उद्दोग हामीले गर्नु हुँदैन’ भनी दिएको अभिव्यक्ति उल्लेख गरी ट्वीट गरेकोमा त्यसलाई रिट्वीट गर्दै मनिषाले लेखकी छिन्, ‘नेपाली काँग्रेसले कोर्स करेक्सनको विनम्रता देखाउनुपर्छ ।’पछिल्लो समय कोइराला राजसंस्थासहितको हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा छिन् । उनले त्यसका लागि अभियान नै चलाएकी छिन् ।मनिषा नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाकी नातिनी हुन् । उनका पिता
काठमाडौंँ : कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठले को,रोना निकै बलियो भएको बताएका छन् । एक साताअघि अस्पतालबाट को,रोना जितेर घर फर्किएका श्रेष्ठले मंगलबार सामाजिक सञ्जा,लमा एक पोष्ट गर्दै सबैको अ,मृतरुपी मायाले गर्दा को,रोनारु,पी विषलाई आफु पन्छा,उन सफल भएको बताएका छन् । उनले लेखेका छन्– ‘ को,रोनाले मलाई पछार्न त नराम्रैसँंगै पछार्यो । पछा`र्यो मात्र हैन अझ लछा`र्यो र हस्पिटलमा लगेर मलाई बेस्कन बजार्यो, ओर्कायो, फर्का,यो, थर्का,उनु थर्का`यो बेलाबेलामा तर्सा`यो पनि । बलियो चाहिँ नि`क्कै ब`लियो रहेछ बजिया … । तर सबैको माया, शुभे`क्षा, प्रार्थ`ना, र आशिर्वादको बलले गर्दा मलाई त्यसले जि`त्न भने सकेन ।’ कृ`तज्ञ´ता ज्ञापन शीर्षकमा पोष्ट गरिएको स्टाटसमा उनले आफ्नो शरीरमा अझै अलिअलि शि`थि`लता बाँकी रहेको समेत उल्लेख गरेका छन् । ‘देशमा अझै पनि को`रोना पी`डितहरु धेरै बाँकी नै छन् कतिपय अझ थपिँदै पनि छन्
काठमाडौं : गायक तथा अभिनेता रोबिन तामाङले नेपाल विद्युत प्राधिकारणका पूर्व प्रब'न्धक कुलमान घिसिङलाई आग्रह गरेका छन् । गायक तामाङले पूर्व प्रबन्धक घिसिङलाई आउँदै गरेको चु'नावमा उमे'दवारी दिन आग्रह गरेका हुन् ।उनले सोमबार फेसबुकमार्फत यस्तो आग्रह गरेका हुन् । गायक रोबिन लेख्छन्, “कुलमान दाइ (कुलमान घिसिङ) चु'नाव आँउदैछ । दाइ म भित्रैदेखि तपाईंलाई उमेद'वारी दिन आग्रह गर्दछु, तपाईंले पक्कै पनि जनताको साथ पाउनुहुनेछ । म नेपालीले शहिरहेको पी'डा देखेर थ’कित भैसकेको छु, हाम्रो देश धेरै राम्रो हुन सक्छ । ”रोबिनले आफ्नो साथ सधैं रहिरहने भन्दै ‘ग्रिन पार्टी’ नाम दिएर नयाँ वातावरणको संर'क्षण गर्ने ए’जेन्डा लिएर अघि बढ्न पनि सु'झाव दिएका छन् । उनको यो आग्रह र सुझावलाई ग’म्भीरतापूर्वक मनन गर्न आग्रह पनि गरेका छन् । “कृपया मेरो कुरामा ग’म्भिर'तापूर्वक सोच्नुहोला, अब त अति भैसक्यो, अब आउने
काठमाडौ : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली पक्षका केन्द्रीय सदस्य तथा भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले प्रचण्डले म'तपत्र च्या'तेर छोरी जिताएको जितवनका जनताले नबिर्सेको बताएका छन् । माडीको आयोजनामा माडीमा भएको अगुवा कार्यकर्ता भेलामा प्रचण्डको राजनीतिक पृष्ठ भूमिबारे बोलेका हुन् । ज्ञवालीले पद र स्वार्थका लागि प्रचण्ड र माधव नेपालले पार्टी फुटाएर गएको बताउँदै उनले मतपत्र च्यातेर छोरी जिताएको चितवनका जनता नबिर्सिएको बताए। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले जनमुखी काम गरेर लोकप्रिय हुँदै गएपछि आफूहरु पछाडि पर्ने डरले अतालिएका माधव–प्रचण्ड पार्टी भित्रको राजनीतिक सहमति तोडेर भागेको ज्ञवालीले बताए ।देश समृद्धि र विकासको क्रममा अगाडि बढेको बताउँदै उनले । माडीमा नेपाल सरकारद्वारा थुप्रै विकासका कामहरु भइरहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राष्ट्रभक्ति र देश विकासको
काठमाडौँ : मलाई दलहरूले राजा बनाएको होइन र जनताले हटाएको पनि होइन ।’ निर्मल निवासमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको यस्तो भनाई सुनेर फर्किएकाहरु अचेल हौसिँदै आगामी चैतसम्म केही राजनीतिक परिवर्तन हुने उत्साहका साथ जुलुसमा जुट्न थालेका छन् । राप्रपाको राजनीतिमा त्यति धेरै सक्रिय नभएपनि राजतन्त्र पुनस्र्थापनामा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर धवल समशेर राणालगायतका व्यक्तिहरू खुलेर अघि बढेका पाइन्छन् । गत शुक्रबार धवल समशेरहरूसँगको भेटमा ज्ञानेन्द्रद्वारा आफूलाई दलहरूले राजा नबनाएको धारणाप्रति भने नेताहरूले कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार दुई दशकअघि दरबार हत्याकाण्डपछिको राजसभा बैठकमा तत्कालीन एमाले र नेपाली काँग्रेसले सदाशयतासाथ ज्ञानेन्द्रलाई नयाँ राजामा समर्थन गरेका थिए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र एमाले महासचिव तथा विपक्षी दलका नेता माधवकुम
काठमाडौं: चर्चित नायिका प्रियंका कार्कीले चुना'वको भोटको आशा गर्ने सरकारलाई पहिले भोट पाउनेलायक काम गरेर देखाउन सुझाव दिएकी छिन् । उनले अहिले कोरो'नासँग जनता जु'धिरहेको र जनताको अवस्था दयनीय रहेको बताउँदै अहिले चुनाव नचाहिने बताएकी छिन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेकी हुन् । उनले सरकारमा ब'सेकाहरुलाई आँखा खोलेर एक पटक देशको स्थिति नियाँलेर हेर्न पनि सु'झाव दिएकिछिन्। उनले आहिलेको समयमा देश र जनतालाईं चूना'व नचाहिने पनि बताएकी छिन् । उहाँको लेख्नुभएको स्टाटस ! हाम्रो नेपाल सरकार प्रति बिनर्म अनूरोध! आखा खोलेर एक़ पटक निहालेर देशको स्तिथि हेरनूस! आहिलेको समयमा देश र जनतालाईं चू'नाव चाहिदैन! यो आहिले प्राथ'मिकतामा पर्देंन। यति सामान्य कुरा पनि देखन र बुझ्न नसकने? देश हाक़ने शक्ति, देशलाईं प्रगति र उन्नतिको मार्गमा लाने र ईमा'नदारी र ज़ि'म्मेवारीको साथ देश